Fifidianana Filohampirenena ao Etazonia: Mbola Hery Mavesatra Ao Amerika Ve Ny Fankahalana Sy Ny Fampitahorana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2018 14:38 GMT
Mainty, Silamo ary Tsy tia Amerikana. Ireo, raha tena izy, no niantsoana an’ i Barack Obama , ilay Demokraty mpifaninana ho filoha, tao anatin'ny andro vitsivitsy. Misy loza mandondona an'i Obama ve ary mbola hery mavesatra ao Amerika ve ny fankahalana sy ny tahotra? Namaly ireo bilaogera manerantany.
Nandefa ekipa tany amin'ny tanàna kely ao Ohio i Al Jazeera ary ireto misy fanehoankevitra vitsivitsy:
Hala, Palestiniana-Jordaniana , izay manoratra teo amin'ny Soul Blossom, (amin'ny anglisy) , no naneho ny heviny tamin'io lahatsary io:
Ooooooadrayy, izay no hany azoko ambara. Toa azoko antoka fa his hamono i Obama raha lasa filoha. Ny olona minomino zavatra mifanohitra amin'ny marina no tena mahasorena ahy. Letyyy e ! Adala, mba fantaro ny zavatra resahanareo ; sady tsy silamo izy no tsy arabo. Ary tsy hoe mainty izy dia midika fa hampahory ny fotsy. Na dia maneso aza ny mieritreritra fa taona maro lasa izay, nahazo nanao fanavakavahana imasombahoaka ny fotsy hoditra manoloana ny mainty oditra… Ka eto isika, mbola feno fankahalana, tsy rariny ary fanavakavahana volon-koditra ilay firenena mahery indrindra eto ambonin'ny tany. Mbola niafina izy teo, fa efa mivoaka mora mora misho masoandro ankehitriny. Mampahatahotra.
Manoratra eo amin'ny No Longer at Ease, ao Doha any Qatar, nanazava kokoa an'io lahatsary io i Abdurahman (amin'ny anglisy):
Tatitra nataon'i Casey Kaufman d'Al Jazeera amin'ny anglisy momba ny anjara toeran'ny firazanana (ary fanavakavahana volon-koditra) tao anatin'ny fifidianana amerikana no voajery mihoatran'ny iray tapitrisa, ary nanehoana hevitra tao amin'ny Washinton Post. Miresaka amin'ny olona manatrika famoriambahoaka ataon'i Sarah Palin i Casey ary manana fihetsehampo mazava mankahala an'i Obama ny ankamaroan'izy ireo, ireo misy [ohatra] vitsivitsy tamin'ny tenin'izy ireo:
Avy amin'ny ramatoa fotsy hoditra, zokiolona: “Matahotra aho hoe raha mandresy izy, haka ny ahefana ny mainty (sic) . Tsy kristianina izy. Firenena kristianina isika ! Ahoana no hiafaran'ity firenentsika ity?”
Lehilahy fotsy hoditra, zokiolona : “Raha manana mpifaninana mainty hoditra ho lasa filoha ianareo, tsy maintsy [mpilalao] voafantina izy. Lery, tena mbola mpisolo toerana fotsiny.”
Lehilahy tanora, fotsy hoditra, mitrotro zaza : “Mitovy aminà ondry lery – na, mba hitsorako azy aminao, amboadia miseho ho ondry. Ary mino an'i Palin aho – feno ny Fanahy Masina izy, ary mino aho fa hitondra fahamarinana sy fahamendrehana ao amin'ny Trano Fotsy”
Lehilahy fotsy hoditra, zokiolona : “Manana fifandraisana aminà mpampihorohoro fantan-daza izy, ho fanombohana.”
Lehilahy fotsy hoditra, zokiolona : “Namanà mpampihorohoro iray eto am,in'ity firenena ity izy !”
Lehilahy fotsy hoditra, zokiolona : “Tena manohana mpampihorohoro izy ! Hitanareo, eh, raha mandeha toy ny gana ary raha maneno ohatran'ny gana, dia gana (hainteny malagasy mifanitsy aminy: Izay miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo). Izany i Obama, ho ahy”
Vehivavy tanora, fotsy hoditra : “Izao zava-drehetra izao, ilay fikafika miozolmàna, ary izao tontolo izao tahaky ny – betsaka ny olona nanadino ny 11 Septambra, fa… Tsy aiko e, ohatran'ny… hafahafa kely.”
Vehivavy, fotsy hoditra: “Obama sy ny vadiny, mampatahotra ahy fa mety mankahala ny fotsy hoditra. Hoe mety manafina an'izany izy.”
Vehivavy fotsy hoditra, zokiolona : “Tsy tiako ny zava-misy hoe mihevitra anay, ny fotsy hoditra, ho jiolahimboto izy… satria tsy izany izahay!”
Mandritra an'izay fotoana izay, namoaka an'ity lahatsary mahatohina ity maneho ny mpanohana ny famoriambahoaka nataon'i Sarah Palin tao Johnstown (Pennsylvanie) i A Political Glimpse from Ireland
Mipetraha ary henoy ireo olona miantso an'i Obama ho silamo, mpampihorohoro ary mpamono zazakely, ankoatra ireo fijery hafa maro loko. Naheno olona ve aho nivazavaza hoe : «Barack Mohammed Obama ?»
Momba ny fankahalana volon-koditra any anaty fampielezankevitra, manamarika i Malcom Clarck, avy ao Royaume Uni (Fanjakna Mitambatra), izay mibilaogy eo amin'ny SixFifty, rehefa avy nijery ny adihevitra farany nifanaovan'ireo mpirotsaka ho filohampirenena, i Barack Obama sy John MacCain :
Voalohany, nisy ny tsy fahafahan'i McCain “mandà” (ny teniny ankafiziny indrindra ho an'ny notadiaviny ho ataon'i Obama teo amin'ny sehatra maro hafa) mivantana ary tsy misy ahiahy ny fihoaràna ratsin'ny fankahalana volon-koditra sy ny fandrahonana maherisetra nataon'ny mpanohana Repoblikana tamin'ny famoriambahoaka sasantsansany. Noho izay, naleon'i McCain «niteny am-pifaliana amin'ny fomba tsotra, fa reharehany ireo olona tonga tamin'ireo famoriambahoakany» Tokony ho simbaina i McCain noho izay teniny izay. Izay no mahatonga ho manan-danja be ny fanodinana ny teny filamatry ny fampielezankaevitr'i McCain ho : The Hate Talk Express (Ilay Kabary Tselatra ho an'ny Fankahalana)
Raha fintinina, nanaoratra i Eatbees, ao Maraoka:
Efa vita vaksiny tsara amin'ireo fanafihana atao amin'ny tenany izao i Obama, satria hitan'ny Amerikana izy namaly am-pilaminana, raha i McCain kosa toa tsy mahazo aina sy masiaka ; ary mankahala ny fanabarabaràna olona mifototra amin'ny fampitahorana ny ankamaroan'ny Amerikana, satria efa hitany ny fiafaran'izany, eny amin'ny ady sy firodanana ara-toekarena, ka aleony ny manary an'izany amin'ny andron'ny fifidianana. Tsy nandaitra izany ho an'ireo Demaokraty tao amin'ny Kaongresy tamin'ny 2006, ary tsy handaitra amin'i Obama, raha tsy hoe misy zavatra tena tsy mety mipoitra alohan'ny 4 novambra, mandrodana ny fahatokisan'ny olona.
Raha io no fanantenana tokana ho an'i McCain, efa resy izy.